Andres Gomez Oo Dhibaatada Ku Haysata Barca La Barbardhigay 'Jahanama' [Ogow Sababta] %
Andres Gomez Oo Dhibaatada Ku Haysata Barca La Barbardhigay ‘Jahanama’ [Ogow Sababta]
Xidiga Barcelona, ee André Gomes, ayaa wuxuu aaminsan yahay in kalsooni la’aanta ku haysata kooxda reer Catalan ay isaga udiiday inuu wax badan ku dareemo Gobolka Catalonia, raaxo badan.
Laacibkaan oo camaaliqada La Liga uga soo biiray dhigeeda Valencia, ayaa wuxuu hada yahay mid inta badan keydka iska fadhiya, inkastoo mararka qaarkood uu helo fursdo uu kooxda Ernesto Valverde, uu kaga soo muuqdo.
Wareysi uu dhawaan siiyay mid kamid ah wargeysyadda kasoo baxa dalka Spain ayuu faah-faahin dheeri ah kaga bixiyay nolashiisa Bluagrana, isagoona umahad-celiyay ciyaartoy, qaar kuwaasoo garab taagan isaga, sida uu yiri.
“Ma aqaan wax aan ku tilmaamo nolasha halkaan, maan aqaan, waxaan ku sifeeyo ugu yaraan waxaan dhihi karaan Cadaab,” ayuu ku nuux-nuux saday, laacibkaan kasoo jeeda wadanka Portugal.
“Waxaa jira saaxiibo wanaagsan, oo halkaan jooga, kuwaasoo si joogta ah ii caawiya, waxaana is-kala hadalnaa arrintaan wax badan, laakiin mararka qaarkood ma ahi xitaa mid guriga kasoo bixi kara.
“Laakiin, wax walba waxay noqon doonan kuwa wanaag kusoo dhamaada, waxaana rajeynayaa inaan heli doono wada saxda ah, oo aan wax wanaagsan ku sameyn karo,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Andre Gomez.
Madaxweynihii Hore Ee FIFA Oo Ka Hadlay Suurta Galnimada In Dib Loo Dhigi Koobka Aduunka 2018